डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, आज अन्य मुलुकको कति छ ? - ramechhapkhabar.com
डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, आज अन्य मुलुकको कति छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार बैशाख २८ गतेका लागि विभिन्न मुलुकहरुको मुद्रा बिनिमयदर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १२३.४४ पैसा र विक्रीदर १२४.०४ पैसा रहेको छ । विवरण अनुसार अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिददर ८५.८५ पैसा विक्रीदर ८६.२६ पैसा रहेको छ ।
यस्तै जापानी येन १० को खरिददर ९.४८ पैसा रहेको छ भने विक्रीदर ९.५३ पैसा रहेको छ । चाइनिज युआन १ को खरिददर १८.३६ पैसा र विक्रीदर १८.४५ पैसा रहेको छ ।
कुन मुलुकको कति छ ?
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन इतिहासकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबारका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमय दरअनुसार एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२४ रुपियाँ २५ पैसा पुगेको छ । भारतसँग स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भएपछि नेपाली मुद्रा पनि स्वचालित रूपमा कमजोर बनेको हो ।
भारतीय रुपियाँ एक सयको नेपाली रुपियाँ १६० स्थिर विनिमय दर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग उच्च हुँदै गएकाले डलरको मूल्य बढेको र अन्य मुद्राको अवमूल्यन भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा डलर अझै महँगिने आकलन अर्थशास्त्रीहरूको छ । डलर महँगो हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई समग्रमा नोक्सानी नै हुने आँकलन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको छ ।
यसले निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सक्ने भए पनि नेपालको निर्यात ज्यादै कम रहेकाले त्यसको लाभ कम हुनसक्छ । डलर महँगो हुँदा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्छ भने पर्यटक आगमन बढ्न लागेकाले केही फाइदा अर्थतन्त्रलाई हुन सक्छ । तर समग्रता आयात उच्च भएकाले नकारात्मक प्रभाव नै बढी रहने डा. नेपालको ठम्याइ छ । अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कले आधार दर ०.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा अमेरिकामै डलरको माग बढ्न थालेको बताइएको छ ।
साथै अमेरिकामै लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम आएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रमै लगानी विस्तार हुँदाको असर पनि डलर बलियो बन्दै गएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । “रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले डलर सञ्चतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले पनि डलर बलियो भएको हो, डलर बलियो बन्नेक्रम अझै बढ्न सक्छ,” उनले भने ।
डलर महँगो हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरबाट जोगिन राष्ट्र बैङ्क अझै चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै डा. नेपालले आयात निरुत्साहनका लागि राष्ट्र बैङ्कले चालेका कदम अझै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
“विदेशका समस्याले नेपाली अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असरको मात्रा बढ्दै गएकाले त्यसको दीर्घकालीन उपाय कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ, अब निर्यात बढाउने उपाय खोजेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनैपर्छ,” उनको सुझाव छ । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले खबर लेखेका छन् ।